‘मकाउका नेपालीले कमाएको रेमिट्यान्स बैद्यानिक प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ’ — News of The World
आज : २०७५ पौष २ गते
पम्फा भुषाल नै आश्चर्यमा
पर्यटक आगमनले व्यवसायीमा जगाएको उत्साह
घरभाडा रकम फिर्ता गर्छु-योगेश भट्टराई
तनहुँमा २५ करोडको सुन्तला उत्पादन
‘मकाउका नेपालीले कमाएको रेमिट्यान्स बैद्यानिक प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ’
संसार न्यूज संवाददाताबैशाख २, २०७५
धादिङ गंगा जमुना गाउपालिका वार्ड नं ५ फुलखर्कका प्रजुन कुमार अधिकारी मकाउमा कार्यरत छन् । झण्डै ५ हजारको हाराहारीमा नेपाली कामदार रहेको मकाउ, नेपालीहरुको लागि राम्रो रोजगार गन्तव्य बनेको छ । विशेष गरेर क्यासिनो, ठूला–ठूला होटलमा सेक्युरेटी गार्डका रुपमा काम गर्ने नेपालीको संख्या धेरै रहेको प्रजुन बताउँछन् ।
नेपाल आर्मीको जुनियर कमिसन अफिसरबाट रिटार्यड भएका अधिकारी सन् २००५ मा सानेपामा रहेकोएस कम कम्पनीबाट फ्रि भिसामा मकाउ पुगेका थिए । हाल उनी ग्रुप फोर सेक्युरेटी कम्पनीमार्फत क्यासिनोमा सेक्युरेटी गार्डका रुपमा काम गर्छन् ।
अधिकारीका अनुसार मकाउमा सामान्य डेढदेखि ९ लाख कमाउने नेपाली पनि छन् । तर, ९ लाख कमाउनेहरु अति जोखिम ठाउँमा काम गर्छन् । अन्तराष्ट्रिय अपराधिहरु राखिने जेलमा उनीहरु जेलगार्डका रुपमा कार्यरत छन् । उनीहरुको आम्दानी पनि मनग्य छ तर, जीवनको पनि रिस्क लिएर काम गर्नुपरेको अधिकारी बताउछन् ।
उनी बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको नयाँशक्ति नेपाल पार्टीको ‘अन्तराष्ट्रि नेपाली समाज मकाउ’ को संयोजक पनि हुन् । अरु पार्टीहरुको जस्तै नयाँशक्तिको पनि भातृसंगठन खोल्नु भएछ के कस्ता गतिबिधिहरु गरिरहनु भएको छ भनेर सोधिएको ऐक्यबद्धताको प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘विशेषत अन्य संघ संस्थाजस्तै नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीको समस्यामा सहयोग गर्नु नै हाम्रो उद्धेश्य हो । हामीले मकाउमा आएको टाइफुन जस्तो प्राकृतिक विपत्तिमा पनि अन्य नेपाली संघ संस्थासँगै मिलेर त्यहाँको नागरिकलाई सहयोग गर्यो । नेपालमा बाढीपीडित, मिर्गौला पीडित, अपाङ्गभएका व्यक्तिहरुलाई पनि सहयोग गरेका छौं । अर्को कुरा पार्टीका लागि पनि आर्थिक, भौतिक तथा नैतिक सहयोग गरिरहेका छौं ।’
पूर्व अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका नयाँशक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले यो देशको आर्थिक समृद्धिका लागि केही गर्ने छन् भन्ने विश्वास राखेका छन् अधिकारीले । केही समयको लागि घरबिदामा आएका अधिकारीले नेता भट्टराईसँग भेट गरेर पार्टीलाई कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ र प्रवासी नेपालीको भूमिका के हुने ? भन्ने बारेमा छलफल समेत गरेका थिए ।
‘हाम्रो पार्टी भर्खर अगाडि बढेको छ । विरुवा रोप्ने वित्तिकै फल दिन्छ भन्ने सोच्नु गलत हो, तर त्यसलाई सकारात्मक सोच लिएर मलजल गरेमा फल अवस्य दिन्छ ।’ अधिकारी भन्छन्, ‘हामी पनि त्यहि सोच राखौं, कसैले नसकेको काठमाडौंको सडक चौडा गराउने काम कसले गर्यो ? ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कसले गर्यो ? अब ति कुराहरु पनि मनन गर्नुपर्छ देश बनाउछु भन्नेलाई सहयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो संयोजकले पनि हरेश नखान सुझाउनु भएको छ ।’
मकाउ सेक्युरेटी गार्डको रोजगारीका लागि लागि राम्रो सम्भावना भएको देश हो । त्यहाँ काम पनि राम्रो र तलब पनि बढीरहेको छ । तर, त्यहाँका नेपालीलले प्रत्येक महिना कमाएको झण्डै ७० करोड रुपैयाँ हुण्डीबाट पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसले न त देशको राजस्वमा योगदान पु¥याएको छ न त नेपालीहरुको पैसा नै सेक्युर छ । ‘हामीले आवाज उठाएका छौं, चाइना बैंकसँग समन्वय गरेर यहाँका बाणिज्य बैंकको साखा त्यहाँ खुल्ने हो भने, त्यो पैसा सबै बैद्यानिक रुपमा देश भित्रन्छ ।’ अधिकारी भन्छन् । यसबारेमा नेपाली काउन्सुलर कमल प्रसाद भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकिएको पनि अधिकारीले बताए ।
उनीजस्तै धेरै नेपालीको आम्दानी राम्रो छ मकाउमा । तर, त्यो पैसा देशमा कुनै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिएको अधिकारी स्वीकार्छन् । राष्ट्रबैंकले विगत केही वर्षदेखि बर्षेनी तपाइहरुसँग ऋण माग्छ मनग्य व्याज दिने भनेर तपाइहरु सरकारलाई ऋण किन दिनुहुन ? भन्ने प्रश्नमा अधिकारी भन्छन्, ‘हामीलाई यसबारेमा विस्तृत रुपमा थाहा छैन, त्यसबारेमा नत सरकार न त्यहाँको काउन्सुलरले नै हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ थाहा भएको भए त हामी गरिहाल्थयौं नि !’
मकाउमा कार्यरत नेपालीको अर्को पनि समस्या छ । उनीहरु घर फर्कदा हङकङ आएर प्लेन चढ्नुपर्ने हुँदा हङकङको भिषा लगाएर मात्र घर आउन पाइन्छ । प्रजुनका अनुसार त्यहाँ उनीहरुले भिषा लगाउनका लागि झण्डै ७ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, भिषा लगाए पनि उनीहरु हङकङको जमिन भने टेक्नु पर्दैन् । मकाउबाट पानी जहाजमा चढेपछि ४५ मिनेटमै हङकङ एयरपोर्टमा पुगिन्छ । ‘यो पैसा पनि हाम्रो त्यत्तिकै जाने हो, हङकङको जमिन नटेके पनि भिषा लगाउनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, पहिले थाइल्याण्ड, भियतनाम, इण्डोनेशिया लगायतका ७ केही देशका नागरिकलाई पनि यस्तै समस्या थियो । तर, अरु देशलाई फुकुवा गर्यो हामीलाई भने गरेको छैन । सरकारले त्यसमा पहल गरे धेरै नेपालीको पैसा त्यतिकै खेर जाने थिएन ।
‘सखी’ मेरो जीवनकी वास्तविक सखी हुन्’
‘देशको अर्थतन्त्र कायापलट गर्नेगरी लगानी गर्ने हैसियत अझै बनिसकेको छैन’
‘मौरीको घार लगेर सिंहदरबारमा छोड्ने अवस्था आएको छ’
नेताहरुसँग गुनासो गरेर बस्नु भन्दा आफैले केही गरेर देखाउने बेला आएको छ